GMMA-60R နှစ်ဆဘက်အစွန်းကြိတ်စက် - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း Taole Machinery
ကြိတ်စက်တွေ beveling GMMA ပြားအစွန်းဘီဗဲလ် & ပူးတွဲအပြောင်းအလဲနဲ့ welding အပေါ်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ precisious စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေး။ ကျယ်ပြန့်ပန်းကန်အထူ 4-100mm ၏အလုပ်လုပ်အကွာအဝေး, ဘီဗဲလ်ကောင်းကင်တမန်သည် 0-90 ဒီဂရီနှင့် option ကိုများအတွက်စိတ်ကြိုက်စက်တွေအတူ။ အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်, အနိမ့်ဆူညံသံနှင့်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေး Advatages ။
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: GMMA-60R
Delivery Date: 5-20 နေ့ရက်များ
GMMA-60R နှစ်ဆဘက်များအတွက် turnable အစွန်းကြိတ်စက်
GMMA-60R အစွန်းကြိတ်စက် ဂဟေပြင်ဆင်မှုအဘို့ကို double ဘက်အစွန်းဘီဗဲလ် & ကြိတ်လုပ်ငန်းစဉ် turntable ဖြစ်ပါတယ်။
ကျယ်ပြန့်အလုပ်လုပ်အကွာအဝေး Clamp ထူ 6-60mm, ဘီဗဲလ်ကောငျးကငျတမနျ 10-60 ဒီဂရီနှင့် option ကိုများအတွက် -10 -60 မှဒီဂရီနှင့်အတူ။
Ra 3.2-6.3 မှာမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ယခင်ကအတူလွယ်ကူသောအပြောင်းအလဲနဲ့။
2 အပြောင်းအလဲနဲ့ Way ကိုရှိပါတယ်:
မော်ဒယ် 1: Cutter သံမဏိဖမ်းခြင်းနှင့်အသေးစားသံမဏိပြားဆောင်ရွက်နေစဉ်အလုပ်ပြီးမြောက်ရန်စက်သို့ဦးတည်သွားစေ။
မော်ဒယ် 2: ကြီးမားသောသံမဏိပြားလုပ်ဆောင်နေစဉ်စက်သံမဏိနှင့်ပြည့်စုံသောအလုပ်၏အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်ခရီးသွားလာပါလိမ့်မယ်။
မော်ဒယ်အမှတ် GMMA-60R နှစ်ဆဘက်အစွန်းကြိတ်စက်
ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း 1050r / မိနစ်
feed မြန်နှုန်း 0-1500mm / မိနစ်
ညှပ်အကျယ် > 80mm
ဖြစ်စဉ်ကိုတာရှည် > 300mm
ဘီဗဲလ်ကောငျးကငျတမနျ 10-60 ဒီဂရီချိန်ညှိ
Worktable အမြင့် 700-760mm
ခရီးသွား Space ကို 800 * 800mm
အလေးချိန် ဘ 225KGS GW 275KGS
ထုပ်ပိုး Size ကို * 1485mm 1035 * 685
မှတ်ချက်: ကိစ္စတွင် + လက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆင်ရေးအတွက် INSERT + Tools များ၏ 1pc ရှုးခေါင်းကို +2အစုံအပါအဝင်နျ Standard စက်
သတ္တုပန်းကန်ကာဗွန်သံမဏိ, သံမဏိ, လူမီနီယမ်စသည်တို့များအတွက်ရရှိနိုင် 1.
2. "K သည်", "V ကို", "X ကို", "Y ကို" ကို process နိုင်သလားဘီဗဲလ်ပူးတွဲအမျိုးအစားကွဲပြား
အမြင့်ယခင်နှင့်အတူ 3. Mills အမျိုးအစားမျက်နှာပြင်များအတွက် Ra 3.2-6.3 ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်
ol ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူပိုမိုလုံခြုံနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 4.Cold ဖြတ်တောက်ခြင်း, စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်အနိမျ့ဆူညံသံ,
Clamp ထူ 6-60mm နှင့်ဘီဗဲလ်ကောငျးကငျတမနျမြားနှငျ့ 5. Wide အလုပ်လုပ်အကွာအဝေး± 10- ± 60 ဒီဂရီချိန်ညှိ
နှစ်ဆခြမ်းဘီဗဲလ်များအတွက် Turnable 7.
နောက်တစ်ခု: သေးငယ်တဲ့ပန်းကန်အဘို့အ GMMA-20T စားပွဲပေါ်မှာ type ကိုကြိတ်စက်
အလိုအလျောက် Chamfering စက်
အလိုအလျောက်ပြား Edge Mills စက်
CNC Driven ပြားဘီဗဲလ် စက်
CNC အမျိုးအစား Edge Mills စက်
နှစ်ချက်ဘေးထွက်ဘီဗဲလ် Mills စက်
နှစ်ချက်ဘေးထွက် Edge Mills စက်
သတ္တု Edge Deburring စက်
ပြား Edge Mills စက်ထုတ်လုပ်ခြင်း
အိတ်ဆောင် Edge Mills စက်
လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများ prep အဘို့အသံမဏိပန်းကန်ဘီဗဲလ်စက်
သေးငယ်တဲ့ p များအတွက် GMMA-20T စားပွဲပေါ်မှာ type ကိုကြိတ်စက် ...
မီတာ chamfering GMMA-60 မိမိကိုယ်မိမိ propelled သတ္တုအစွန်း ...